Maxaad ka ogtahay xiriirrada jaceyl ee uu sameyay Ronaldo iyo abaalmarinada uu hantay? | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Maxaad ka ogtahay xiriirrada jaceyl ee uu sameyay Ronaldo iyo abaalmarinada uu hantay?
Maxaad ka ogtahay xiriirrada jaceyl ee uu sameyay Ronaldo iyo abaalmarinada uu hantay?
Posted by: Ahmed Haadi February 15, 2019
Himilo FM – Cristiano Ronaldo oo dhashay 5tii Febraayo 1985, waxa uu bilaabay kubadda cagta isaga oo aad u da’yar waxa uu kusoo caan baxay dhalinta naadiga Sporting CP.
Dad badan ma fileynin in Ronaldo uu gaari doono heerka ugu sarreeya kubadda cagta iyadoo la fiirinayo awoodda jirkiisa. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii uu u saxiixay Manchester United, Ronaldo waxa uu helay aabihii kubadda cagta Sir Alex Ferguson kaasi oo gacan qabad u noqday, waxaana uu ka caawiyay in uu noqdo ciyaaryahanka adduunka ugu fiican.
Ronaldo ayaa rumeeyay riyadiisa kaddib markii uu sannadkii 2009-kii u dhaqaaqay Real Madrid. 10 sanno oo uu joogay Santiago Bernabeu, Ronaldo ayaa afar jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or, afar koob oo Champions League ah, waxaana uu noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan Real Madrid.
Sannadkii 2018, laacibka Portuguese-ka ayaa heshiis u saxiixay kooxda heysata horyaalka Talyaaniga ee Juventus, isagoo doonaya in uu kula guuleysto UCL kooxda Old Lady.
Sida aynu ognahay Ronaldo waxa uu xiriir saaxibtinnimo kala dhaxeeyaa Georgina Rodríguez; bal aynu eegno saddexda haween ee uu xiriirka la lahaa sannado badan, iyo koobabka uu ku guuleystay marxalad kasta.
#3 Merche Romero
Romero waxay aheyd gabar modalista ah oo u dhalatay Portugal sidoo kale waxay aheyd soo saare Tv. Labada shaqsi ayaa kulmay intii lagu jiray xilligii Ronaldo ee Manchester United, waxa uu xiriir ka dhaxeeyay Janaayo 2005 ilaa September 2006.
Xilligaas wuxuu ahaa mid niyadjab la saan qaaday Ronaldo. Inkastoo United ay ku guuleysatay koobka League Cup 2005-06, waxaana finalka FA Cup ka qaaday Arsenal. Sidoo kale waxaa jiray dhacdo qaldan oo aheyd in uu cassaan u qalqaaliyey Wayne Rooney dhacdadii Koobka Adduunka iyadoo taageerayaal badan oo England ah kalsoonidii u hayeen ay kala laabteen.
Ronaldo waxa uu u muuqday in uu ugu danbeyn noloshiisa gaarka ah ku degay markii uu saaxib la noqday gabadha ku caan baxday xayeysiinta dharka ee u dhalatay Rusia ee Irina Shayk waxa uuna xiriirkoodu jirey intii u dhaxeysay 2010 ilaa 2015.
Intii uu Shayk la ahaa wadajir Ronaldo ayaa horumariyey xiraddiisa ciyaareed. Wuxuu ku guuleystay horyaalka La Liga, labo Copa del Reys, Supercopa de Espana, UEFA Champions League, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup iyo laba abaalmarin oo Ballon d’Or ah.
Waxa uu sidoo kale noqday gooldhaliyaha ugu sarreeya tartanka Champions League 2012-13, 2013-14 iyo ololihii 2014-15.
#1 Georgina Rodriguez
Waxay u muuqataa in Ronaldo uu ugu dambeyntii helay gabadhii ku habooneyd noloshiisa ee Georgina Rodriguez, oo ah model iyo jilaa.
Labada shaqsi waxa ay haasaawaha bilaabeen bishii Nofeembar 2016, xilli Georgina inta badan lagu arkay dhacdooyinka kala duwan ee uu kasoo muuqdo Ronaldo, gabadhaan ayaa xirrir wanaagsan la leh hooyadiis. Rodriguez oo 25-jir ah ayaa dhawaan dhashay gabar, waxaana uu u muuqdaa in uu si deg deg ah u guursan doono.
Kaddib markii uu burburay xiriirkii uu la lahaa Irina Shayk, Ronaldo ayaan hakin wax qabadkiisa ciyaareed isaga oo sii laba jibaaray xirfaddiisa kubadda cagta.
Waxa uu sii waday in uu ku guuleysto jaa’isadii afaraad iyo midkii shanaad ee Ballon d’Or, waxa uu Real Madrid ka caawiyey in ay ku guuleystaan Champions League seddex jeer oo isku xigta xilli ciyaareedyada 2015-16, 2016-17 iyo 2018-19.
Previous: Dalladda SOMA oo xustay maalinta Raadiyaha Adduunka
Next: Baraf caddihii Ruushka oo madoobaaday!